पत्रपत्रिका Archives - nepalroyalnews.com
९ माघ, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक अखबारहरूले विविध विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ । समाचार अनुसार, विधेयक जस्ताको जस्तै पास पारित ...
७ माघ, काठमाडौं । शिवमाया तुुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट दिएको राजीनामा, नेता–कार्यकर्ताका लागि सत्तारूढ नेकपाले जारी गरेको आचारसंहितालगायत विषय आजका अखबारहरूको प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा सीआईवीले निकालेको निष्कर्ष, , अवैध क्रसरलाई राजनीतिक दलबाट भइरहेको संरक्षणलगायत खबर पनि आजका दैनिक पत्रिकाम...
६ माघ, काठमाडौं । अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय आजका सबै दैनिक अखबारहरूको मुख्य समाचार बनेको छ । गत असोजदेखि सभामुखविहीन हुँदा सिर्जना भएको रिक्तता अन्त्य गर्दै नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘अन्ततः पूर्वमाओवादीलाई सभामुख’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्णले मुख्य समाचार छापेको...
अनियमिततामा डुब्दै स्थानीय तह, छोरा–बुहारी सडक बनाउने, बाबु अनुगमन गर्ने
५ माघ, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिएको विषयले आजका दैनिक अखबारहरूमा प्राथमिकता पाएका छन् । लामो अलमल र अन्योलतालाई चिर्दै सिफारिस समितिले शनिबार द्वन्द्वकालीन मुद्दा निमटाराका लागि गठित आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारी सिफारिस गरेक...
काठमाडौँ । लोकतन्त्रसम्बन्धी अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था के हो ? लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । यो संविधानले व्यवस्था गरेका सबै संवैधानिक निकायले संविधानभित्रको आफ्नो कर्तव्य, दायित्वलाई इमानदारितापूर्वक बहन गरे भने लोकतन्त्रमाथि कुनै चुनौती खडा हुन सक्दैन । लोकत...